Akụkọ - Ndị ọkà mmụta sayensị biomedical kwesịrị imekwu ihe iji melite mkpa na mmụgharị nke nyocha omenala cell.
Anyị na-eji kuki iji kwalite ahụmịhe gị.Site n'ịga n'ihu na-eme nchọgharị na webụsaịtị a, ị kwenyere na anyị ji kuki.Ozi ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa ngwa ngwa maka akụkọ nyocha biomedical nke mkpụrụ ndụ anụ ahụ ka ọ bụrụ ahaziri na nkọwa zuru oke, yana ijikwa ma tụọ ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke omenala cell.Nke a ga-eme ka ihe nlegharị anya nke physiology mmadụ bụrụ nke ziri ezi ma nye aka na mmụgharị nke nyocha.
Otu ndị ọkà mmụta sayensị KAUST na ndị ọrụ ibe na Saudi Arabia na United States nyochara akwụkwọ 810 na-ahọrọ na-enweghị usoro na ahịrị cell mammalian.Ihe na-erughị 700 n'ime ha gụnyere 1,749 nyocha omenala sel nke ọ bụla, gụnyere data dabara adaba na ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke usoro omenala cell.Nyocha nke otu ahụ na-egosi na ọ dị mkpa ka a rụkwuo ọrụ iji melite mkpa na mmeghari nke ọmụmụ ndị dị otú ahụ.
Zụlite mkpụrụ ndụ n'ime incubator a na-achịkwa dịka ụkpụrụ ọkọlọtọ siri dị.Ma mkpụrụ ndụ ga-eto ma "na-eku ume" ka oge na-aga, na-agbanwe gas na gburugburu ebe obibi.Nke a ga-emetụta gburugburu ebe ha na-eto eto, ma nwee ike gbanwee acidity nke omenala, ikuku oxygen na-agbaze, na carbon dioxide.Mgbanwe ndị a na-emetụta ọrụ cell ma nwee ike ime ka ọnọdụ anụ ahụ dị iche na ọnọdụ dị na ahụ mmadụ dị ndụ.
"Nnyocha anyị na-emesi ike n'ókè nke ndị ọkà mmụta sayensị na-eleghara anya nyochaa na ịchịkwa gburugburu ebe obibi cellular, na ruo n'ókè nke akụkọ na-enyere ha aka iru nkwubi okwu sayensị site na ụzọ ụfọdụ," Klein kwuru.
Dị ka ihe atụ, ndị nchọpụta chọpụtara na ihe dị ka ọkara n’ime akwụkwọ ndị e depụtara n’akwụkwọ akụkọ ahụ emeghị ka a kọwapụta ọnọdụ okpomọkụ na ikuku carbon dioxide nke omenala cell ha.Ihe na-erughị 10% kọrọ ọdịnaya ikuku oxygen dị na incubator, na ihe na-erughị 0.01% kọrọ na acidity nke ọkara.Ọ nweghị akwụkwọ kọrọ gbasara ikuku oxygen ma ọ bụ carbon dioxide gbazere na mgbasa ozi.
Ọ na-eju anyị anya nke ukwuu na ndị nchọpụta elegharala ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi anya nke na-ejigide physiologically mkpa ọkwa n'oge dum usoro nke omenala cell, dị ka omenala acidity, ọ bụ ezie na a maara nke ọma na nke a dị mkpa maka cell ọrụ.”
Ndị otu a bụ Carlos Duarte, onye na-ahụ maka ihe gbasara mmiri na KAUST, na Mo Li, onye na-ahụ maka ihe ndị dị ndụ na stem cell, na mmekorita ya na Juan Carlos Izpisua Belmonte, onye na-ahụ maka mmepe mmepe na Salk Institute.Ugbu a ọ bụ prọfesọ na-eleta na KAUST ma na-atụ aro ka ndị ọkà mmụta sayensị biomedical mepụta akụkọ ọkọlọtọ na usoro njikwa na nha nha, na mgbakwunye na iji ngwá ọrụ pụrụ iche na-achịkwa gburugburu omenala nke ụdị cell dị iche iche.Akwụkwọ akụkọ sayensị kwesịrị ịtọlite ​​​​ụkpụrụ akụkọ ma chọọ nleba anya zuru oke na njikwa acidity nke mgbasa ozi, ikuku oxygen gbazere na carbon dioxide.
"Nkọkọ ka mma, ịlele, na ịchịkwa ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke omenala cell kwesịrị imeziwanye ikike nke ndị ọkà mmụta sayensị ikwugharị na imepụtaghachi nsonaazụ nnwale," ka Alsolami na-ekwu."Nleba anya nke ọma nwere ike ime ka nchọpụta ọhụrụ pụta ma mee ka nyocha nke usoro nyocha nke ọma dị n'ahụ mmadụ."
“Omenala mkpụrụ ndụ anụ ahụ bụ ihe ndabere maka imepụta ọgwụ mgbochi nje na teknụzụ ndị ọzọ dị ndụ,” ka ọkà mmụta sayensị mmiri bụ́ Shannon Klein na-akọwa."Tupu anwale anụmanụ na ụmụ mmadụ, a na-eji ha amụ usoro ihe ọmụmụ mkpụrụ ndụ bụ isi, megharịa usoro ọrịa, na mụọ nsí nke ogige ọgwụ ọhụrụ."
Klein, SG, wdg (2021) Nleghara nleghara anya gburugburu ebe obibi na omenala cell mammalian chọrọ omume kacha mma.Injinia biomedical eke.doi.org/10.1038/s41551-021-00775-0.
Tags: B cell, cell, cell culture, incubator, mammalian cell, mmepụta, oxygen, pH, physiology, preclinical, nnyocha, T cell
N'ajụjụ ọnụ a, Prọfesọ John Rossen kwuru maka usoro ọgbọ na-abịa na mmetụta ọ na-enwe na nchọpụta ọrịa.
N'ajụjụ ọnụ a, News-Medical gwara Prọfesọ Dana Crawford banyere ọrụ nyocha ya n'oge ọrịa COVID-19.
N'ajụjụ ọnụ a, News-Medical na Dr. Neeraj Narula kwurịtara banyere nri ndị a na-edozi nke ọma yana otu nke a nwere ike isi mee ka ohere nke ọrịa bowel inflammatory (IBD) dịkwuo elu.
News-Medical.Net na-enye ọrụ ozi ahụike dịka usoro na ọnọdụ ndị a siri dị.Biko mara na ozi ahụike dị na webụsaịtị a bu n'obi ịkwado kama dochie mmekọrịta dị n'etiti ndị ọrịa na ndị dọkịta / ndị dọkịta na ndụmọdụ ahụike ha nwere ike inye.
Dl-Pyroglutamic acid, L-Glutamine ntụ ntụ, Acetyl-L-Leucine, 537-55-3, L-Leucine, Kemịkalụ ọgwụ,